Dagaal Askar Looga Dilay Jubbaland Saanadna Looga Furtay Oo Ka Dhacay Duleedka Kismaayo. – Shabakadda Amiirnuur
Dagaal Askar Looga Dilay Jubbaland Saanadna Looga Furtay Oo Ka Dhacay Duleedka Kismaayo.
September 25, 2019 4:45 pm by admin Views: 184
Faahfaahin ayaa kasoo baxaysa dagaal shalay ka dhacay mid kamid ah degaanada hoos taga magaalada Kismaayo halkaasoo ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku beegsadeen askar ka tirsan kuwa Jubbaland.
Dagaalka dhex maray labada dhinac oo in muddo ah soconayay islamarkaana la isku adeegsaday hub culus iyo mid fudud ayaa waxaa askarta Jubbaland looga dilay tiro askar ah. Ilo wareedyo ayaa inoo xaqiijiyay iney ka dhinteen 3 askari, kana dhaawacmeen in ka badan shan kale.
Ciidanka Jubbaland ee uu dagaalku qabsaday ayaa fagaaraha uga cararay meydadka sadaxda askari ee laga dilay, balse dhaawacyada ayaa waxay u qaadeen magaalada Kismaayo. Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa u suura gashay iney la wareegaan hubkii ay wateen ciidanka la dilay.
Sadax qori oo nooca darandooriga u dhaca ah ayay shan farood iyo calaacal ku dhigeen, waxaana qoryahaasi ay kala yihiin 2 AK47 ah iyo 1-qori oo PKM ah. Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkan. Dhanka kale saraakiisha aagga Cabdalla Biroole ee Jubbaland oo aan la xiriirnay ayaa sheegay inuu khasaare kasoo gaaray dagaalka, balse waa ay ka gaabsadeen iney faahfaahin ka bixiyaan.
Sidoo kale waxaa isla degaanka Cabdalla Biroole galabta ka dhacay weerar ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku beegsadeen gaari Cabdibile ah kaasoo ay la heleen qarax. Gaariga oo ay saarnaayeen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan Jubbaland ayaa waxaa gaaray wax yeello.